khuldulee.com - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
एपी.वान. टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको कार्यक्रम नेपाल आईडलमा अब छ प्रतिस्पर्धी बाँकी छन । आज टप ५को छिनोफानो हुदै छ । अघिल्लो साता नेपाल आडईलको मन्चबाट टप सातमा पुगेर काठमा..
अभिनेत्री बेनिशा हमालले सिनेमा स्वरबाट सिने क्षेत्रमा डेब्यू गरेकी हुन । मोडलिङ हुदै सिने क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी बेनिशाले त्यस अघि चितवनको कालिका एफ.एम. मा रेडियो प्रस्..
नेपाली सिने क्षेत्रमा जेरी मार्फत नेपाली रजतपटमा भित्रिएकी नायिका हुन् आना शर्मा । उनले डेब्यू सिनेमाबाटै निकै चर्चामा आईन । उनको कामलाई धेरैले मन पराए । डेब्यू सिनेमाप..
अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का अभिनित चलचित्र छक्का पन्जा २ रिलिजको क्रममा रहेको छ । सिनेमाको पहिलो गीत“एदाजु”पनि यूटूबमा हिट छ । सिनेमा छक्का पन्जा असोज ११ गते रिलिज हुदैँ ..
नयाँ कलाकार र नयाँ उर्जा देखेर निकै खुशी लाग्छ : अभिनेता विजय लामा
विजय लामा कलाकारिता क्षेत्रमा प्रसिद्ध नाम । जो आफ्नो मेहनतका कारण आजको ठाँउमा पुगेका हुन । उनी कलाकार, ईभेन्ट म्यानेजर, निर्देशकका साथै नेपाल एयर लाईन्सका क्याप्टेन पन..
टलक जङ्ग भर्सेस टुल्के ,पशुपती प्रसाद जस्ता चर्चित सिनेमामा काम गरेर सिने नगरीमा स्थापीत नाम हो अभिनेता खगेन्द्र लामिछाने । उनले आफू सिनेमाको हिरो भन्दा सिनेमा भित्रको ..
नायिका सुरक्षा पन्त आलोक नेम्बाङ्गको सिनेमा “अझै पनि” बाट सिनेमा क्षेत्रमा आएकी हुन् । पेसाले सिभिल ईन्जिनियर सुरक्षा कला क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सक्रिय छिन् । उनले काम गरेको सिनेमामा “धनपती” असारको २३ गते रिलिज हुदैँछ । धनपतिको प्रोमोशनको क्रममा फर्सीनेटवर्क आएकी सुरक्षाले हामी सँग आफू किशोरावस्था हुँदाका कुरा सेयर गर..
अभिनेता प्रदिप खड्का अभिनित सिनेमा ‘प्रेम–गीत २’ साउन १३ गते रिलिज हुँदैछ । उनले आफ्नै प्रोडक्शन हाउसबाट बनेको सिनेमा “स्केप”बाट अभिनयको शुरुवात गरेका हुन् । डेब्यू सिनेमाबाट खासै चर्चा र सफलता नपाएका प्रदीपलाई दोस्रो सिनेमा ‘प्रेमगीत’ले परिचित गरायो । अझ भन्ने हो भने उनी यहि सिनेमाबाट रातारात स्टार बनेका हुन् । अहिले ‘प्रेमगीत’..
अभिनेता पल शाहको सिनेमा “म यस्तो गीत गाउँछु” असारको ३० गते रिलिज हुदैछ । सिनमाको ट्रेलर र गीतलाई धेरैले माया गरेका छन् । पलले म्यूजिक भिडियो हुदै “नाई न भन्नु ल–३” बाट सिने क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन् । सिनेमाको प्रमोशनको क्रममा रेडियो अडियोमा आईपुगेका पलले आज हामी सग जिवनको केही रोमान्चक कुराहरु सेयर गरेका छन् […]
नायिका अश्लेशा ठकुरीले सन्तोष सेनको सिनेमा ‘प्रेमगीत २’ बाट डेब्यु गर्दैछिन् । साउन १३ गते रिलिज हुने यस सिनेमाको प्रमोशनमा व्यस्त रहेकी नायिका अश्लेषाले हामीसँग जीवनका केही महत्वपूर्ण पाटाहरु सेयर गरेकी छिन् । बाल्यकाल र पढाई मेरो जन्म कैलाली जिल्लाको बौनिया भन्ने ठाँउमा भएको हो । म घरको कान्छी छोरी हो । म बाहेक घरमा ७ [&helli..
तपाईको योनीबाट सेतो पानीमात्रै बग्छ भने त्यो समस्या हैन । तर सेतो पानी बग्दा माछा धोएको जस्तो पानी बग्ने, गनाउने, योनी चिलाउने, कपडामा लाग्ने खालको पानी बग्ने अनि तल्लो पेट दुख्ने, यौन सम्पर्क गर्दा दुख्ने समस्याहरु छन् भने तपाईले ध्यानदिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो खालका समस्याहरु छन् भने चेक जाँचगर्न जरुरी हुन्छ । तर तपाईको योनीबाट..
गर्भपतन पछि यौन चाहन हराएर जान्छ ? –डा. खेम कार्कीको जबाफ
हामीले गर्भपतनबारे केही प्रश्नहरु डाक्टर खेम कार्कीलाई गरेका छौँ । हाम्रो प्रश्न डाक्टर खेम कार्कीको जबाफ आजको खुल्दुली डट कममा । गर्भपतन पछि पहिलाको जस्तो यौन चाहान हुँदैन हो ? गर्भपतन गराएपछि यौन चाहना हराउँछ भन्ने होईन जति तपाईमा यौन चाहना थियो त्यती नै हुन्छ । तर यो शारीरिक, मानसिक समस्या तपाईँमा देखियो भने कम […]
मिथुन जस्तै नाच्थेँ, माईकलको जस्तै ज्याकेट लगाउँथे– किशोरावस्थामा गायक धिरज राई
गायक धिरज राई नेपाली माईकल ज्याक्सनमा रुपमा चिनिन्छन् । उनले गाउने र नाच्ने शैलीले मात्रै हैन गेटअपले पनि माईकल ज्याक्सनको ट्याग पाएका हुन् । उनलाई किशोरावस्था देखि नै माईकल ज्याक्सन खुबै मन पर्थे । उनी माईकलको जस्तै जयाकेट लगाउने अनि कपाल पाल्ने गर्थे । त्यस्तै उनलाई मन पर्ने अर्का कलाकार हुन् मिथुन चक्रवर्ती । उनी […]